လေနုအေး: သားနဲ့ Birthday Theme
Happy Birthday ပါ သားသားရေ။
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ လိမ္မာတဲ့ သားကလေး ဖြစ်ပါစေ။
ချန်းဆို ဘယ်တော့ မှ ကိတ်မရွေးရဘူး
သားသားရေ သားသားတော့ မသိဘူး ဦးဦးတော့ ပျော်သွားတယ်။ တကယ်
မနက်ဖြန် အိမ်ပြောင်းလာမယ် နော်
လက်မခံရင် I kill u လူမိုက်တစ်ယောက်ငှားထားသေးဗျ
Happy Birthday သားရေ.. ၁၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကျမှ.. ဘာကိတ်မုန့် တောင်းဆိုမလဲ.. စောင့်ကြည့်နေပေတော့..မတန်ခူးရေ..း))
သားလေးး happy birthday!
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ချစ်သော ဖေဖေ မေမေနှင့်အတူ.ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ..။
သားသားက ၅ နှစ်ပြည့်သွားတာကုိး..
Happy Birthday သားသားရေ..
သူလိုချင်တာကို ပူဆာတတ်တယ်နော်.. သားသားနဲ့ မွေးရက်တော့ မတူဘူး.. မွေးလ တူတယ်.. သားသားက ၅ နှစ် အန်တီကတော့.. ၃- နှစ်ပေါ့.. :D
ချစ်စရာ သားသားလေး ၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် ဘ၀တလျှောက်လုံး အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဖေဖေ မေမေက လိုချင်တာတွေ အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတာပဲ။
ချစ်စရာ သားသားလေး မွေးနေ့တိုင်းမှာ ခုလိုပဲ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပြီး မိသားစုနဲ့ အတူတကွ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ... ။
Happy Birthday ပါ...
ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းလှတဲ့ မွေးနေ့လေး တခု ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်...
သားသားလိုချင်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ဖေဖေ မေမေတို့နဲ့ အတူ မွေးနေ့ပေါင်း များစွာ ဆင်နွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...။
** တန်ခူးရေ... သူကများ ကိုယ့်ကို လူမိုက်လေး ဘာလေးနဲ့.. (နဲနဲလောက် ပညာပေးလိုက်ပါအုံး... )
Happy Birthday ပါသားလေးရေ...
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်...
သားလေးရော..သားလေးရဲ့ မေမေပါ..ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀လေး အမြဲပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ...
ကြီးလာတဲ့ကလေးတွေက သူတို့စိတ်ကြိုက်ကိတ်မုန့် လေးနဲ့ မွေးနေ့ကို ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးလို့ အန်တီ တစ်ယောက်ပြောဖူးတယ်..
ကူးငယ်ငယ်က ကိတ်မုန့် မာမီမှာပေးတာ ယုန် ပုံလေး...ခုထိမှတ်မိတယ်..း)
ဘတ်ဒေးကိတ်နဲ့ ပုံကကျတော့ ဖေဖေနဲ့ တူတယ်။
မေမေရော ဖေဖေရော နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့
Happy Birthday ပါသားလေးရေ.. ငါးနှစ်တောင်ပြည့်သွားပကောလား.. ချစ်တဲ့ မေမေ၊ ဖေဖေနဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကွယ်..။
အိမ်က ကလေးတွေကတော့ ကိတ်မုန့်ကို ကြိုမစဉ်းစားပါဘူး.. ဆိုင်ရောက်မှ သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ မှာတယ်.. တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် ဘယ်သူ့မွေးနေ့မှာ ဘာကိတ်မုန့်ဆိုတာတော့ မှတ်မိပါ့..ဒါမျိုး ဘယ်လိုမှတ်ထားမှန်းမသိပါဘူး တန်ခူးရယ်..။ Birthday Cake ကို သီချင်းဆိုပြီး မီးမှုတ်တာ ကြိုက်လွန်းလို့ ဘယ်သူ့မွေးနေ့မဆို ညဘက်ဆို ကိတ် အစီအစဉ်ထည့်ရတာနဲ့ပဲ တို့ကတော့ တကယ့်ကို ... စိတ်မပါချင်တော့ပါဘူး..:(
သားကလေး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဘေးကင်းကွာလို့ ချစ်သောသူများနဲ့ အတူတကွ အသက်ရာကျော်ရှည် ပါစေ...
တန်ခူးရေ အမ ခရီးထွက်နေရလို့ ခုပြန်ရောက်မှ ဘလော့လည်နိုင်လို့ပါ...
သားသားလေး ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ များစွာ ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါစေ လို့ အန်တီခင်မင်းဇော်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သားသားအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းက နောက်ကျနေလို့ အပြေးလာဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီအဖေ ဒီအမေကို ရထားတဲ့သားသားက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကံအကောင်းဆုံး လူနော်။ မိဘကျေးဇူးကို နားလည် သိတတ်တဲ့ သားကောင်းရတနာ အကျော်အမော်လေး ဖြစ်ပါစေ။
ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေး ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ လို့ အံတီ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် သားရေ။
ကျေးဇူးပါတီတီပေါက်ရေ… နောင်နှစ်ဆို မမချန်းကို သူ့ ဘာသာရွေးခိုင်းကြည့်ပါလားခင်ညား… သားလို ပျော်သွားလိမ့်မယ်…
ဦးဦးရေ… သားသားအိမ်မှာ နေရို့ ရပါတယ်… ဒါပေမယ့် တီတီနဲ့ လက်ထပ်ပြီးမှ သားသားအတွက် ညီညီရေး ညီမရေး တွေရှိမှ လာနေနော်… ဒါမှ သားသားဆော့ရို့ ရမှာ…
တီတီကေရေ… မေမေက ၁၈နှစ်ပြည့်ရင် လူကိတ်မုန့် ပူဆာနဲ့ တဲ့…
တီတီနုရေ… ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးနော်… သားသားနဲ့မွေးလတူတော့ တီတီနုက အရမ်းချောမှာ သေချာတယ်…
တီတီပန်ရေ… သားသားအတွက် ညီညီလေး ဘယ်တော့မွေးပေးမှာလဲဂျာ…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ တီတီမေ…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ တီတီသက်ဝေ…
ကျေးဇူးအညားကြီးတင်ပါတယ် အန်တီနှင်း ခင်ညာ…
တီတီကူးမေမေကလဲ တီတီကူးကို အရမ်းချစ်တယ်နော်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ တီတီကူးရေ…
သားသားကို မေမေနဲ့ တူတယ်ဆိုလို့မေမေက ပျော်နေတယ် တီတီသီတာရေ…
တီတီသိဂီင်္တို့ အိမ်မှာ ပျော်စရာကြီးနော်… ကိုကိုမမတွေ အညားကြီးဆိုတော့ သားသား မြန်မာပြည်ပြန်လာရင် လာလည်ဦးမယ်…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ တီတီသန့် ရေ…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ တီတီငြိမ်းရေ…
နောက်ကျပါဘူး တီတီခင်ရဲ့… ကျေးဇူးအညားကြီးတင်ပါတယ်…
တီတီချိုသင်းရေ… ဆုတောင်းအရှည်ကြီးအတွက် ကျေးဇူးပါခင်ညာ…ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…